Kitika fanaovana amboradara, kofehy fanaovana amboradara, fehiloha vita peta-kofehy vita amin'ny hazo - Cherish
Amin'ny fifantohana Kalitao avo, fandefasana haingana, mendrika ny tsara indrindra ianao.
Kitapo volamena am-bava
Alefaso ny tenanao, mandefasa namana, avelao hiaraka ho tsara tarehy ny olona maro kokoa.
Tanana, fanehoana ny fo, fiveloman'ny tsara.
Ny lamina amboradara amin'ny tanany dia kodiarana sy boribory, loko marevaka, marefo sy tsara tarehy, efitrano fanaovana makiazy mandeha, mitazona makiazy marefo amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Eto daholo ny safidinao. Manana amboradara telo-habe, fonon-ondana, fitaratra, poketra, kojakojam-bolo, rojo, peratra, kavina, amulets, sarontava, mosara, kofehy amboradara ary fitaovana napetraka. Kalitao avo, fandefasana haingana, mendrika ny tsara indrindra ianao.
CHERISH, natsangana tamin'ny 1995, dia miorina ao Yiwu, Sina, renivohitry ny entana kely eto an-tany. CHERISH dia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary marketing ny vokatra vita tanana DIY. Nandritra izay 20 taona lasa izay, miaraka amin'ny famolavolana matanjaka, ny fampandrosoana, ny fanavaozana ny fahaiza-manao, ny famoronana indostrialy DIY stitch stitch hanome tombony maromaro. Ny marika efa misy an'ny orinasa: Ailuo, Aiyouwei, CHERISH, Cross-stitch, sary hoso-doko Diamond, Patchwork, Embroidery andiam-bokatra maromaro mitana toerana lehibe eo amin'ny tsena. Fivarotana franchise misy marika 2000 mahery manerana ny firenena, neken'ny indostria ny fitarihana. Tongasoa eto CHERISH.